2017 MYANMAR CAR OF THE YEAR AWARDS - Drive Myanmar Car Magazine
Drive Myanmar Car Magazine
Home News Events 2017 MYANMAR CAR OF THE YEAR AWARDS
2017 MYANMAR CAR OF THE YEAR AWARDS
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈက Drive Magazine မှကွီးမှုးကငျြးပခဲ့တဲ့ မွနျမာ့တဈနှဈတာအကောငျး ဆုံးကားဆုပေးပှဲအခမျးအနားကို ပွနျပွီးအမှတျရစဖေို့ရာ ဖျောပွပေးလိုကျရ ပါတယျ။ မကွာခငျ အခြိနျမှာဆိုရငျလညျး ၂၀၁၈ ခုနှဈအတှကျ တဈနှဈတာ အကောငျး ဆုကားဆုခြီးမွှငျ့ပှဲကို ပွုလုပျ ကငျြးပတော့မှာဖွဈပွီး Drive Website နဲ့ Facebook တို့မှတဈဆငျ့ Update တှကေိုဖျောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က Drive Magazine မှကြီးမှုးကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာ့တစ်နှစ်တာအကောင်း ဆုံးကားဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို ပြန်ပြီးအမှတ်ရစေဖို့ရာ ဖော်ပြပေးလိုက်ရ ပါတယ်။ မကြာခင် အချိန်မှာဆိုရင်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် တစ်နှစ်တာ အကောင်း ဆုကားဆုချီးမြှင့်ပွဲကို ပြုလုပ် ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပြီး Drive Website နဲ့ Facebook တို့မှတစ်ဆင့် Update တွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleပြိုင်ကားလောကရဲ့ ဘုရင်တစ်ဆူ (သို့) Ferrari 458 italia
Next articleHyundai LF Sonata 2018
Premier Automotive မှ FAW Truck မော်ဒယ်သစ် J6 (၇) စီး အပ်နှံမှုပြုလုပ်
2019 Hyundai Accent Test Drive
Full size sedan အဖြစ်ဖန်တီးထားသည့် Cadillac CT6 ကို Pacific Alpine Myanmar မှစတင်မိတ်ဆက်
Limited Woven – leather ထည့်သွင်းထားသည့် Maserati Quattro Porte နှင့် Levanter တို့အား...
IIHS ၏ လုံခြုံမှု အရှိဆုံး Rating တွင် 2019 Toyota RAV4ရောက်ရှိ
Compact SUV အမျိုးအစားဖြစ်သည့် Hyundai Creta 2020 ကို ဈေးကွက်အတွင်း စတင်မိတ်ဆက်
ရဲရင့်တဲ့ကျားသစ်တစ်ကောင်လိုအစွမ်းမျိုးနဲ့ Jaguar E Pace
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကားတစ်စီးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ညွှန်းပြသခဲ့တဲ့ Rolls-Royce Phantom Limelight Collection
SUZUKI CIAZ ကားသစ်မိတ်ဆက်ပွဲနှင့် ကားကံစမ်းပွဲ
DRIVE ‘ is Myanmar’s own Motor Magazine covering the latest cars, trends and happenings locally and internationally. DRIVE is here to tell you how to get the most from your car and your driving experience and in particular the image and feeling thatacar confers. We invite you to become one of the cognoscenti. You want to know all there is to know about cars? Read DRIVE. Drive ဆိုတာနောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေ၊ကားလောကရဲ့ဦးတည်ရာတွေ၊နောက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာ ကားလောကမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးနေတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့တစ်ခုတည်းသော ကား မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Drive ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ သင့်ကားအတွက်ဘာတွေအများဆုံးရရှိနိုင်မလဲ၊သင့်အတွက် ကားမောင်းနှင် မှုအတွေ့အကြုံစတာတွေကို ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ခံစားနိုင်မယ့် ကားတွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲတစ်ခုအသွင်ဆောင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့နှံ့စပ်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။သင့်အနေနဲ့ကားနံ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးသိလိုပါသလား။Drive ကိုဖတ်လိုက်ပါ။
Si Thu - August 25, 2019